MACLUUMAADKA TARANKA NOOLAHA PIT HEELER DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Noolaha Pit Heeler Dog iyo Sawirro
Ereyga Bahalka Mareykanka ee Digaaga / Eyda Uurka ee Lo'da Australiyaanka ah
Blaze the Pit Heeler at 1 1/2 sano jir
Blue Godka Lo'da Terrier
Red Red Godka Terrier-ka
Pit Heeler ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Godka Dibida Maraykanka iyo Buluug Heeler . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
(Xusuusin: Blue Heeler waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Australian Heeler, Hall's Heeler, Queensland Heeler, Doug Cattle, Australian Cattledog iyo Australischer Treibhund.)
Allie the Pit Heeler oo 2 jir ah— 'Waa saaxiib wanaagsan!'
Vega isku darka Queensland Heeler / Pit Bull (Pit Heeler) sida eey yar oo jirta 5 bilood —'Vega waa mid aad iyo aad u jecel oo jecel inuu salaaxo. Iyadu waa dhakhso waxbarto oo aad u caqli badan. Wey heysataa tamar badan waana ciyaar laakiin wuu kula degganaan doonaa. Waxay jeceshahay inay ciyaarta qabato qaarna way leedahay u janjeersashada xoolaha . Waxay saaxiibtinimo badan la leedahay dadka kale haddii aan agteeda ka joogno. Waxay jeceshahay inay leefleexdo oo ciyaarto. Waxay sidoo kale ku ilaalisaa guriga qaylada iyo shisheeyaha. Iyadu waa mid ka mid ah taranka jacaylka badan ee aan soo qabtay. Vega waa eey aad u weyn qoyskeyga. '
Rosie the Pit Heeler oo ah ey ey 4 bilood jir tahay— Aad ayay u firfircoon tahay. Waxaan ogaanay inay iyadu leedahay qaar Casaan Heeler dareenka sida ceyrsashada iyo qaniinista cidhibta. Iyadu sidoo kale waa cuddly iyo daacad annaga oo ah mulkiilayaasheeda.
Rosie the Pit Heeler sida eey yar oo jirta 4 bilood
Rosie the Pit Heeler oo ah eey yar oo jirta 8 toddobaad
Eeg tusaalooyin badan oo ah Godka Heeler
Pit Heeler Sawirada
Liiska eyda lo'da Australiyaanka ah ee Isku Darsiga ah
american bulldog shay mix puppy
sawirka dibi mastiff ah
kemmer cur vs buurta cur
boqorka charles spaniel papillon mix